Ahoana ny fomba fandraisam-peo ny terminal ary mamorona gif animated | Avy amin'ny Linux
Isika izay manao fampianarana na mamorona torolàlana ho an'ny mpampianatra dia mahafantatra ny maha-zava-dehibe izany raketo ny efijeryToy izany koa isika izay manampahaizana manokana Linux, ilaintsika ny terminal terminal, izany no antony itondrantsika fangatahana antsoina pijery fa ankoatry ny fanampiana anay hanoratra ny terminal dia ahafahantsika mamorona gif mihetsiketsika ny firaketana.
1 Inona no atao hoe Peek?
2 Ahoana ny fametrahana Peek
2.1 Mametraka Peek amin'ny kaody loharano
2.2 Ampidiro ao amin'ny Arch Linux sy ny derivatives i Peek
2.3 Ampidiro ny Peek amin'ny Ubuntu / Debian ary ny derivatives
3 Ahoana ny fomba fandraisam-peo terminal miaraka amin'ny Peek
Inona no atao hoe Peek?
pijery dia fitaovana open source, voasoratra anaty vala avy amin'ny alemà Philipp Wolfer, izay ahafahantsika manoratra ny terminal ary mamorona gif mihetsika ny zavatra ataontsika eo amboniny.
Ity fitaovana tsotra nefa matanjaka ity dia manana varavarankely misy frame izay ampiasaina handrafetana ny terminal, manana ny bokotra fotsiny izy handraketana na hampijanonana ny fandraisam-peo, ary rehefa vita ny fandraisam-peo dia manome anao safidy hitahiry ny GIF na aiza na aiza no tadiavinao.
Ny fitaovana dia mety manana fampiasana maro, fa natao indrindra hizarana andiana baiko na hetsika ataontsika ao amin'ny terminal. Ohatra iray amin'ny fivoahan'ny fitaovana etsy ambany:
Ahoana ny fametrahana Peek
Ny fametrahana Peek dia tsotra ihany, manana fonosana ho an'ny Arch Linux, Debian ary ny derivatives izy, ary azo apetraka ihany koa avy amin'ny kaody loharano namboarina tamin'ny fizarana rehetra. ireo dingana etsy ambany
Mametraka Peek amin'ny kaody loharano
Azonao atao ny manangona sy mametraka Peek amin'ny alàlan'ny CMake:
Ampidiro ao amin'ny Arch Linux sy ny derivatives i Peek
Ireo mpampiasa Arch Linux sy ny derivatives-ny dia afaka mampiasa ireto manaraka ireto PKGBUILD misy amin'ny AUR. Azonao atao ny mametraka azy amin'ireto baiko manaraka ireto:
Ampidiro ny Peek amin'ny Ubuntu / Debian ary ny derivatives
Azonao atao ny misintona ny kinova Peek's .deb farany avy amin'ny Eto. Azonao atao ny mametraka azy amin'ny fomba manaraka:
Ahoana ny fomba fandraisam-peo terminal miaraka amin'ny Peek
Ny fizotry ny fandraketana ny terminal sy ny famoronana gif an'ny firaketana dia tena tsotra ary eto ambany izahay no mitanisa azy.
Manokatra terminal izahay ary mampifanaraka azy amin'ny habeny tadiavinay.
Manitatra na mampihena ny jery todika mifanaraka amin'ny haben'ny terminal izahay, manamboatra ny mason-tsivana mba hifanaraka tanteraka amin'ny bara fijanonana.
Press Record amin'ny peek.
Alohan'ny fiandrasana 3 segondra dia mankany amin'ny terminal izahay ary manomboka manatanteraka ny baiko tadiavintsika.
Rehefa vitantsika ny fomba fanao dia tsindrio ny fijanonana, hisokatra ho azy ny varavarankely hamonjy ilay gif vokatr'izany.
Misafidy izay hitahiry sy hitahiry izahay.
Nahafinaritra anay ny gif.
Ity dia fomba tsotra sy haingana hanoratana ny zavatra ataontsika ao amin'ny terminal, fa azontsika atao koa ny mampiasa azy handraketana izay faritra rehetra amin'ny efijery anay ary hiteraka gif mihetsika. Manantena izahay fa hanompo anao betsaka izany ary manantena ny hevitray izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tutorials / Manuals / Tips » Ahoana ny fomba fandraisam-peo ny terminal ary mamorona gif mihetsika
Tsy afaka nanangona azy aho 🙁
TSY nahita Vala (tsy hita: VALA_EXECUTABLE)
Andramo apetraka i Vala
sudo apt apetraka valac
Amin'ny lafiny iray, ny baiko farany amin'ny fametrahana avy amin'ny kaody loharano dia:
sudo hanao fametrahana
ROMSAT dia hoy izy:
hey, aorian'ny famakiana ny lahatsoratra mahafinaritra anao sy ny fanarahana ny dingana rehetra ho an'ny taratasy, dia tsy mijanona ny fiasa ho ahy peek.
Ny efijery dia feno tsipika manomboka amin'ny frame = ...
Niezaka ny nihazakazaka azy tany aoriana aho tamin'ny fanaovana: $ peek &
fa tsy manao toy izany koa amiko.
Miara-miasa amin'ny Ubuntu MATE aho.
Mandrosoa, arahaba avy any Malaga.
Valiny amin'i ROMSAT
Salama, manana fanontaniana / sosokevitra aho. Mety tsy mety ny mametraka fanontaniana, fa tsy haiko hoe aiza.
Voalohany indrindra, miarahaba anao sy ny tonian-dahatsoratra rehetra noho ny atiny tsara eto amin'ny tranonkala. Nanampy ahy be dia be izy ireo.
Eny, isaky ny mitady lahatsoratra aho, dia manandrana mitady ny farany indrindra na farafaharatsiny hahalala ny datin'ny lahatsoratra. Tsy hitako eto. Hitako izany tao amin'ny lisitry ny lahatsoratra vaovao izay miseho eo amin'ny pejy fandraisana fa tsy ao anatin'ny lahatsoratra. Satria matetika aho no mahazo lahatsoratra avy amin'ny google, dia tsy hitako mihitsy ny daty.
Ka ny fanontaniana dia aiza no misy ny daty ao anatin'ny paositra? Ary raha tsy asehon'izy ireo izany dia heveriko fa tsara raha nampiditra azy ireo izy ireo.
Hitako fa tsy izaho irery no nitrangan'izany! Tena mahasosotra tokoa ny mahita lahatsoratra momba ny zavatra notadiavinao ary, rehefa te hizaha toetra ny zavatra resahinao ianao dia jereo fa tsy misy / miasa intsony satria lany andro. Ny fametrahana isa vitsivitsy, ny daty, dia ho voavaha, ary tsy heveriko ho lafo izany, raha tsy izany dia tsy hanoratra ity fanehoan-kevitra ity aho.
Raha sosokevitra iray, ny zavatra ataoko matetika dia ny mijery ireo fanehoan-kevitra, fa misy daty ireo, na dia mazava ho azy aza, manondro izany, ary matetika koa aho no mitady amin'ny bilaogy isan-karazany, satria mahazatra ny mamerina lahatsoratra, indrindra raha zavatra miavaka. Saingy mazava ho azy, mety tsy ho hitanao amin'ny fomba rehetra izany ary ho sisa tavela aminao ny fisalasalana.
Nampiharinay ny soso-kevitrao, manomboka izao dia ho hitanao ny daty ao amin'ny lahatsoratra (alohan'ny hanaovanao azy amin'ny fonony)
Mety ho hitan'ny mpamaky ihany koa fa mahaliana ilay baiko 'script', izay mirakitra fotoam-pifanarahana amina rakitra rakitra, noho izany dia tsy nilaina ny nandrakitra horonantsary.